Tsy fandriampahalemana Nitazona basy sady nandrahona manamboninahitra ilay jiolahy
Hiakatra fampanoavana ato ho ato ny raharaha, ao anatin’ny famotorana ilay tratra nitana basy tsy ara-dalàna ary nandrahona kapiteny zandary any an-toerana, araka ny resaka manokana tamin’ny lehiben’ny kaompania Betroka.
Karohina ihany koa ireo mpiray tsikombakomba taminy nivarotra nahazoany ilay basy. Basy iray “Calibre 16” vita gasy saron’ny zandary tany amin’io lehilahy io, mitovy tsy misy valaka amin'irony vita vahiny irony fa saingy tsy ara-dalàna ny fisiany sy ny fitazomana io fitaovam-piadiana io. Efa nampiasaina nandrahonana ho faty manamboninahitra iray izay efa nisotro ronono tao Ianabinda andro vitsivitsy lasa izy io.
Teo no niainga ny fanadihadiana fa nanao fitarainana teo anivon'ny Zandarimaria ilay manamboninahitra efa nisotro. Rehefa nahazo alalana ny zandary dia niroso avy hatrany tamin'ny fikarohana ilay nahavanon-doza. Ity farany izay sarona tao amin'ny kaominina ambanivohitra Ianabinda andro vitsivitsy lasa izay. Mitosaka ny basy tsy ara-dalàna izay mamparefo tanteraka ny fandriampahalemana ary voasoketa amin’izany ny fitondrana. Efa niandry ny fanaterana basy tsy ara-dalàna mialoha ny 26 jona 2019 ihany ny fitondrana izay mijoro sy ny minisitera rehetra voakasika saingy ezaka very maina izany raha tsy misy ny fanamarinana ny basy rehetra sy ny taratasiny.